चौरजहारी अस्पतालमा अत्याधुनिक मेसिनद्धारा विरामीको उपचार सेवा सुरु
रुकुम । जिल्लाको दोस्रो व्यापारीक केन्द्रको रुपमा रहेको चौरजहारीमा अवस्थित चौरजहारी अस्पतालमा अत्याधुनिक मेसिनद्धारा विरामीहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवा संचालन भएको छ । रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगाएत...
सल्यान । सरकारले निःशुल्करुपमा स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गर्ने औषधि खरिद नगर्दा समस्या देखिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि केन्द्रबाट आपूर्ति गर्ने औषधि खरिद नभएपछि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि वितरण...
भक्तपुर अस्पतालमा आइसियु सेवाका लागि पहल गरिने
भक्तपुर । भक्तपुर अस्पतालले सघन उपचार कक्ष (आइसियु) सेवा सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने भएको छ । अस्पतालका नव नियुक्त अध्यक्ष प्रेम खड्काले सोमवार पदभार ग्रहण गर्दै अस्पतालमा आउने बिरामीलाई अन्यत्र पठाउन...
मच्चिएर यौन सम्पर्क गर्दा …..
हालै अमेरिकामा गरिएको स्वास्थसम्बन्धी एक अध्ययन अनुसन्धानले प्रत्येक १ लाख व्यक्तिमध्ये ७ जना स्मरण शक्ति गुम्ने रोगको शिकार हुने गरेको जनाएको छ। अचानक केही समयका लागि सबै कुरा बिर्सने यो घटना चिसो पा...
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी फागुन १ देखि बाथ मुटुरोगीको भल्व शल्यक्रिया पूर्ण निः शुल्क गर्ने भएको छ । स्वाथ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले ‪आज शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रको २१औं बार्षिकोत्सवका अव...
केटाहरुको पहिलो नजर किन बक्षस्थलमैं पर्छ ?
भनिन्छ पहिलो भेटको प्रभाव जीवनभर रहिरहन्छ । खासगरी जव बयस्क केटा र केटीको भेट हुन्छ उनीहरु एक अर्काका सके सम्म धेरै कुराको बारेमा जानकारी लिन खोज्छन् । पहिलो भेटमा केटीका १० कुराको जानकारी लिने एक अध्...
काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा राजेन्द्र पन्त नियुक्त भएका छन् । बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा पन्तलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री ग...
एजेन्सी । महिलाहरुका लागि सेक्स गर्नुका निकै फाइदाहरु छन् । के तपाईंलाई थाहा छ, सेक्स गर्नाले महिलाको तौल घट्छ, छाला चम्किलो हुन्छ र मुटुको रोगहरु पनि लाग्दैन । महिलाहरुका लागि सेक्स किन आवश्यक छ र यस...
नेपालपाटी समाचार प्रभाव : अस्पतालले माग्यो बिरामीसंग माफी
काठमाडौ । नेपालको चर्चित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल, थापाथलीमा उपचाररत जाजरकोटका विरामी देव बहादुर ठकुरीसंग अस्पताल प्रशासनले माफी मागेको छ । घुँडा दुखेको सा...
रोमान्टिक प्रेमी प्रमिकाहरुका लागि यस्ता छन् महत्वपुर्ण टिप्सहरु
हरेक प्रेमिकाले प्रेमिबाट नजिककोृ व्यवहारको अपेक्षा राखेका हुुन्छन् भने प्रेमीले आत्मीय माया । तर दुवै पक्षले एक अर्काको भावना नबुुझ्दा पे्रम जिवनमा समस्या देखा पर्ने गर्दछ । रोमान्टिक जोडीहरुले आफ्नो...
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा .डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् । शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी ...
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभर करिब १० करोडभन्दा बढी महिलाले गर्भनिरोधक औषधिको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् १९६० को दशकमा गर्भनिरोधक गोलीको सुरुवात भएपछि यसको प्रयोगले फरकफरक खालका स...
रुकुम । प्रत्येक नेपालीको मृगौला परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको देशव्यापी अभियानलाई प्रचार प्रसार गर्ने तथा पत्रकारहरुलाई स्वस्थ राख्ने उद्धेश्यले रुकुमका पत्रकारहरुको मृगौला परिक्षण गरिएको छ । ...
काठमाडौ । हड्डी तथा नशाका बिरामीहरुको लागी निशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गरिएको छ । ललितपुरको धोबीघाट स्थित म्यानुयल थेरापी एण्ड पेन रिलिफ सेन्टर प्रालिले निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ...
काठमाडौं । पुरुषका तुलनामा महिलाका यौन समस्याबारे त्यति चर्चा गरिएका छैनन् । यौन इच्छा र उत्तेजनाको कमी, चरमसुखको अभाव र सम्भोगका बेला हुने कष्टजस्ता यौन समस्याले महिलाको जीवनलाई रुग्ण, बेस्वादिलो र अ...
धनगढी । स्थानीय हलमानपुरस्थित राज्यलक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित आँखा शिविरमा ३४५ रोगीको निःशुल्क उपचार गरिएको छ । भारतीय दूतावासको सहयोगमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, गेटा आँखा अस्पतालले दुई द...
जाडो महिना सुरु भइसकेको छ । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा चिसो बढेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ । जाडो मौसममा हामीहरुलाई विषेश गरि रुघा खोकी जस्ता रोगहरुले बढि दुःख द...
अष्ट्रेलियामा नर्स बन्नका लागि धेरै उपायहरु छन् । तर तपाईले नर्सिङ शिक्षाको अध्ययन जुन देशबाट गर्नुभएको छ, त्यसले पनि फरक पार्दछ । तपाईको नर्सिङ अनुभब र पढाईको पहुँच अनुसार बेग्ला बेग्लै सुविधा र शैक्...
रोल्पा । दुई स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु गरिएको छ । हाल जिल्ला अस्पताल लिवाङ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरीमा सो सेवा सुरु गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा भवानी शर्माले बताए...
कस्ता पुरुषहरुप्रति आकर्षित हुन्छन महिलाहरु ?
अधिकांश महिलाहरु पुरुषको तुलनामा धेरै नै आफ्नो स्वास्थ्य र सुन्दरतामा ध्यान दिन्छन । साथै उनीहरु पुरुषहरुमा पनि यस्तै गुण मन पराउँछन् । यसका लागि पुरुषहरुले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु जरुरत हु...